ပစ္စုပ္ပန်ကိုရွေးချယ်ပါ - Worldwide ဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2016-03 > ပစ္စုပ္ပန်အဘို့သင့်စိတ်ကိုဖွင့်ထားပါ
"အကယ်၍ သာ အကယ်၍ ငါမထင်မှတ်သောယောက်ျားနှင့်လက်ထပ်လျှင်ကောလိပ်တွင်ရှုံးနိမ့်သူဖြစ်ပြီးယခုအခါသန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ကြာရှည်မတည်ရှိခဲ့ပါ ယခုတွင်သူသည်စျေးကွက်၏အစုရှယ်ယာအများစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ”“ ကျွန်မအသက် ၁၆ နှစ်မှာကိုယ်ဝန်မရခဲ့ရင်တောင်။ အရာရာကိုလွှင့်ပစ်မယ့်အစားတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ပြီးရင်သာငါလုပ်နိုင်မယ်”” ပြီးတော့ငါတက်တူးထိုးထားမှာမဟုတ်ဘူး။ "" ငါသာမလုပ်ခဲ့ရင် ... "
လူတိုင်း၏ဘဝသည်လွဲချော်နေသောအခွင့်အလမ်းများ၊ ပညာမဲ့သောရွေးချယ်မှုများနှင့်နောင်တရမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကိုပြောင်းလဲလို့မရတော့ပါဘူး။ သူတို့ကိုလက်ခံတာ၊ သူတို့ဆီကသင်ယူတာ၊ ရှေ့ကိုတိုးတက်တာကပိုကောင်းတယ်။ သို့သော်များစွာသောသူတို့သည်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများကြောင့်ပိတ်မိနေပုံရသည်။
အခြားသူများသည် အနာဂတ်တွင် မရေမတွက်နိုင်သော အမှတ်တစ်ခုအတွက် ၎င်းတို့၏ဘဝဖြင့် စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့က အနာဂတ်ကို မျှော်လင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ငါတို့ အသက်ရှင်တယ်။ ဘုရားသခင်သည် ပစ္စုပ္ပန်တွင် အသက်ရှင်သည်။ သူ့နာမည်က "ငါ" မဟုတ်ဘဲ "ငါဖြစ်ခဲ့တယ်" သို့မဟုတ် "ငါဖြစ်မည်" သို့မဟုတ် "ငါသာဖြစ်ခဲ့လျှင်" ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့သွားရာလမ်းသည် နေ့စဉ်ခရီးဖြစ်ပြီး ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘုရားသခင်သိမ်းဆည်းထားသောအရာများကို အာရုံမစိုက်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် များစွာလွဲချော်နေပါသည်။ မှတ်ချက်- မနက်ဖြန်အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ဒီနေ့ ဘုရားသခင် မပေးဘူး။ နောက်နေ့တွင် မန္နကို ကယ်တင်ရန် ကြိုးပမ်းသောအခါ၊2. မောရှေ ၁၆)။ အနာဂတ်ကို စီစဉ်ရာတွင် အမှားအယွင်းမရှိသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်များကို နေ့စဉ် ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်မုန့်ကို ယနေ့ပေးတော်မူပါ” ဟု ဆုတောင်းပါသည်။ မက်သယူး 6,30-၃၄ က မနက်ဖြန်အတွက် စိတ်မပူဖို့ ပြောထားတယ်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဂရုစိုက်သည်။ အတိတ်ကို ငိုကြွေးပြီး မနက်ဖြန်အတွက် စိတ်ပူနေမယ့်အစား Matthew ကပြောတယ်။ 6,33 ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစိုက်သင့်သည့်အရာ- "ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို ရှေးဦးစွာရှာပါ..." ဘုရားသခင်ကိုရှာရန်၊ သူနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိရန်၊ ကိုယ်တော်၏ရောက်ရှိနေခြင်းကို သတိပြုမိရန်နှင့် နေ့တိုင်း သူ့ထံချဉ်းကပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်ပေးသောအရာကို ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်သင့်သည်။ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးစားပေးဖြစ်ပြီး အတိတ်မှာ အဆက်မပြတ်နေထိုင်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
သင်တို့ပတ်လည်ရှိဖန်ဆင်းခြင်း - နေ၊ နေ၊ နေ၊ မိုး၊ ပန်းများ၊ ငှက်များ၊ သစ်ပင်များ၊ တောင်များ၊ မြစ်များ၊ , feel - သင့်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်များစွာ ဆုတောင်းပါ (1. သက် 5,16စာ-၁၈)။ ကျေးဇူးတော်၊ ချီးမွမ်းခြင်း၊ အသနားခံခြင်းနှင့် အသနားခံခြင်းတို့ဖြင့် ရှည်လျား၍ တိုတောင်းသောဆုတောင်းချက်များသည် သင်၏အာရုံစူးစိုက်ပြီး ယေရှုအပေါ်၌တည်နေစေရန်အတွက် ဆုတောင်းပါ2,2).
ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်၊ သမ္မာကျမ်းစာအခြေခံမူများနှင့် ခရစ်တော်သည် တစ်နေ့တာလုံး ကျွန်ုပ်အတွက် အချို့သောအခြေအနေများကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်နည်း (ဆာလံ၊ 1,2; ယောရှု [အာကာသ]]1,8).